WAR CULUS: Zidane oo fasaxaya mid ka mid ah weeraryahanadiisa BBC si uu u helo Mbappe – Gool FM
(Europe) 23 Juunyo 2017. Sida ay sheegayaan warar ka imaanaya dalka Faransiiska in Zinedine Zidane uu wada hadalo qarasoodi ah uu la yeeshay dhaliyaha Monaco Kylian Mbappe uu ugu sheegay inuu fasaxayo mid ka mid ah weeraryahanadiisa BBC si uu isaga boos ugu baneeyo.
Real Madrid ayaa u aqoonsatay weeraryahanka da’da yar saxiixeeda xiga ee cajiibka ah iyo waliba bartilmaameedkeeda koowaad ee suuqa xagaaga.
18 jirka wacdaraha wayn dhigaya ayaa sidoo kale waxaa doonay kooxo badan oo heer sare ah oo ka dhisan Yurub.
L’Equipe ee ka soo baxa France ayaa warinaya in Zidane uu aad ugu baahi qabo helida da’ yarka ay wadaagaan dhalashada Faransiiska, wuxuuna wada hadalo qarsoodi ah ugu sheegay inuu fasaxayo midkood Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ama Gareth Bale si uu booska ugu sii xaaro.
Ma cada midka uu ZIdane dhabarka ka toogan doono.
Ronaldo ayaa waxaa isagu qoorta u suran dhibaatooyinkiisa u gaarka ah isagoona usoo muuqday sida inuu doonayo inuu isaga soo huleelo gegada Bernabeu.
Yeelkeede, waxaa la arkaa inuu dib uga fikiro arrinkaa oo iska joogo kaddib markii uu madaxwaynaha kooxda Perez uu laacibka u ammaanay si aan gambasho lahayn una difaacay.
Benzema ayaa noqon karaya dooqa cad uu Zidane kooxda ka diri karo, laakiin muhiim ayuu u ahaa kooxda markii ay xilli ciyaareedkii tagay ku guuleysteen La Liga iyo Champions League.
Los Blancos ayaa rikoodhka suuqa u jabisay si ay ula soo saxiixato Ronaldo iyo Bale, waxaana laacibka reer Wales loo arkaa inuu ugu dambeyn Bernabeu ka badeli doono kabtanka xulka Portugal.
Wada hadalada qarsoodida ah waxaa sidoo kale looga hadlay in macalinka reer France uu dhaliyaha Monaco u damaanad qaaday inuu ka ciyaarsiin doono boos joogta ah kal ciyaareedka soo socda.
Arsenal ayaa mooday inay ugu cad cadahay soo xero galinta Mbappe maadaama ay xaqiiqdii u ballan qaadi kartay boos joogta ah.
Hasayeeshee, Zidane ayaa muluqa reer France u sheegay inuu muhiim ka noqon doono olalihiisa xiga.
''Waxaan doonaynaa wixii Donnarumma u roon'' - Aabaha Gigio oo hadlay
''Juventus sidii la rabey Talyaaniga uguma metesho Yurub waana koox la iska garaaco'' - Esteban Cambiasso